Tetany (မေးခိုင်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Tetany (မေးခိုင်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
ကြွက်တက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများညစ်ခြင်းနဲ့ တုန်ရီခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေကို မေးခိုင်ရောဂါလို့ခေါ်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေတွေဟာ စိတ်နဲ့ မထိန်းချုပ်ပဲ ကြွက်သားတွေ သူ့အလိုလို ဆက်တိုက်ညစ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ မေးခိုင်းရောဂါကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကြွက်သားညစ်ခြင်းဟာ အချိန်ကြာမြင့်ပြီး အလွန်နာကျင်ရပါတယ်။
Tetany (မေးခိုင်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Tetany (မေးခိုင်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မေးခိုင်ရောဂါဟာ အောက်ပါလက္ခဏာတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲနေတတ်ပါတယ်။
အထက်တွင်မဖော်ပြထားသောလက္ခဏာများလည်းရှိပါသေးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိလိုသည်များရှိလျှင် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
စာရေးခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ တွေးတောခြင်း၊ မှတ်မိခြင်းတို့တွင် အခက်အခဲများရှိလာခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် အားနည်းခြင်း၊ ထုံကျင်ခြင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ရောဂါလက္ခဏာတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် သိချင်တာတွေရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်ပုံခြင်းတွေ မတူညီကြပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာကအသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Tetany (မေးခိုင်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မေးခိုင်ရောဂါဟာ ဓါတ်ဆားဓါတ်မညီမျှခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်းနည်းခြင်း(Hypocalcemia)ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ မက်ဂနီစီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်နည်းခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေအပြင် ကိုယ်တွင်းအက်စစ်ဓါတ်အလွန်များခြင်း(Acidosis)နဲ့ ကိုယ်တွင်းအယ်ကာလီဓါတ်များခြင်း(Alkalosis)တို့ကလည်း တရားခံတွေပါပဲ။
မေးခိုင်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအချက်တွေကတော့ အောက်ပါတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အချို့လူတွေမှာ မေးခိုင်ရောဂါဟာ အောက်ပါတို့ကဲ့သို့သော အရေးပေါ်အခြေအနေတွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ် အသည်းအသန် ပျက်စီးခြင်း
ပန်ကရိယ အသည်းအသန် ရောင်ခြင်း
Tetany (မေးခိုင်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်အခြေအနေကို စစ်ဆေးသိရှိဖို့ မေးခိုင်ရောဂါနဲ့ သက်ဆိုင်နေမယ့် မေးခွန်းများကို မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။
Tetany (မေးခိုင်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆရာဝန်က ရောဂါအကြောင်းအရင်းကို သိမယ်ဆိုရင် ရောဂါရဲ့ရင်းမြစ်ကို ရှာဖွေကုသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကုသမှုရဲ့လိုရင်းကတော့ မညီမမျှဖြစ်နေတဲ့ ဓါတ်ဆားတွေကို ကယ်ဆီယမ်၊မဂနီဆီယမ်တို့ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးခြင်းအားဖြင့် ထိန်းညှိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကယ်ဆီယမ်ထိုးတာကတော့ အသုံးများတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ နောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်အောင် ကယ်ဆီယမ်ကို ဗီတာမင်ဒီနဲ့ တွဲသောက်ဖို့လည်း လိုနိုင်ပါတယ်။
မေးခိုင်ရောဂါရင်းမြစ်ကို သိပြီဆိုတာနဲ့ ပိုမိုတိကျတဲ့ ကုသမှုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ ဥပမာပြောရရင် ပါရာသိုင်းရွက်ဂလင်းမှာရှိတဲ့ အကျိတ်တွေကြောင့် ဖြစ်နေမည်ဆိုပါက ထိုအကျိတ်တွေကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကယ်ဆီယမ်ဓါတ်ပြန်လည်းဖြည့်တင်းပေးခြင်းက သတ်မှတ်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရောဂါရင်းမြစ်ကို ကုသတာမဟုတ်တော့ဘဲ မေးခိုင်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ကုသတာ ဖြစ်သွားလို့ပါ။
https://www.healthline.com/health/tetany#overview1. Accessed October 19, 2017.
https://www.healthgrades.com/right-care/bones-joints-and-muscles/tetany–causes. Accessed October 19, 2017.